आकर्षक महिला तथा पुरुषको कुनै सर्वमान्य परिभाषा छैन । ‘आकर्षक’ केलाई मान्ने ? व्यक्तिपिच्छे यसका फरक–फरक ‘इन्डिकेटर’ हुन सक्छ । कसैलाई आँखा मन पर्ला, कसैलाई ओठ । कोही अनुहार मन पराउलान त कोही फिगर । कुनै व्यक्तिको काम वा कसैको आकर्षक छवि मन पर्ला त कसैलाई कसैको शारीरिक बनावटले मोहित तुल्याएको हुन सक्ला । बौद्धिक आकर्षण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
जे भए पनि संसारभर फरक–फरक मापदण्डका आधारमा सर्वाधिक आकर्षक महिला– पुरुषहरू खोज्ने चलन छ । ती मापदण्डमा सर्वेक्षण, जनमत, व्यवसायिक सफलता, प्रभाव, सामाजिक योगदान, सुन्दरताजस्ता पक्षलाई आधार बनाइएको हुन्छ । ती सबैजसो सर्वेक्षणमा मिडियामा छाइरहने भएका कारण नाम कहलिएका सेलिब्रेटी तथा सार्वजनिक भूमिकामा देखिएका व्यक्तिहरू नै आकर्षण महिला–पुरुष भएका देखिन्छन् ।
नेपाली परिवेशमा सर्वाधिक आकर्षक भ्यालेन्टाइन ड्रिम गर्ल वा ड्रिम ब्वाइ को होलान् ? यसको सर्वस्वीकार्य उत्तर खोज्न गाह्रो छ । यद्यपि साप्ताहिकले भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा नेपालका सर्वाधिक आकर्षक महिला तथा पुरुष खोज्ने जमर्को गर्ने गरेको छ । आठ वर्षअघिदेखि हरेक भ्यालेन्टाइन डेमा साप्ताहिकले छान्दै आएको आकर्षण महिला–पुरुषको खोजीलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ।
नेपाली समाजमा विविध क्षेत्र एवं व्यवसायमा संलग्न केही प्रतिनिधि पात्रबीच मतका आधारमा साप्ताहिकले आकर्षण महिला–पुरुष छान्ने प्रयास गरेको हो । यो सर्वेक्षण समाजका विभिन्न क्षेत्र, पेसा एवं व्यवसायमा संलग्न ३४ जना (१७ जना महिला तथा १७ जना पुरुष) लाई प्रतिनिधि नमुनाका रूपमा सहभागी गराइएको थियो । साप्ताहिकले आफ्नो सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई सुन्दरता, व्यक्तित्व, बौद्धिकता, काम एवं प्रभावलाई आधार बनाउन अनुरोध गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी १७ जना पुरुषले ‘आकर्षण महिला’ छानेका थिए भने १७ जना महिलाले ‘आकर्षण पुरुष’ ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले छनौट गरेको सूचीका आधारमा साप्ताहिकले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने १० जनालाई सर्वाधिक आकर्षण महिला–पुरुषका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । यो मत सर्वेक्षणमा पनि मिडियामा छाइरहने सेलिब्रेटी एवं सार्वजनिक पद धारण गरेर समाजमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफलहरूकै बोलवाला छ । गत वर्ष सर्वाधिक आकर्षण महिलाको सूचीमा पहिलो स्थान ओगट्न सफल अभिनेत्री प्रियंका कार्की यस पटक पनि त्यही स्थानमा छिन् । प्रियंकालाई स्टारडम, आकर्षक जीउडालका कारण सबैले रुचाएको देखियो । आकर्षक नेपाली महिलाको अघिल्लो संस्करणमा दोस्रो वरियतामा रहेकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानीलाई यसपटक पनि कसैले माथ गर्न सकेनन् । सुन्दरता र भद्र व्यक्तित्वकै कारण हिमानी धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएकी हुन् ।
केही वर्षदेखि गायन, सेक्सी जीउडाल एवं आकर्षक ठुम्काका कारण आकर्षण महिलाका रूपमा रोजाइमा पर्दै आएकी गायिका इन्दिरा जोशी यस पटकको सर्वेक्षणमा तेस्रो स्थानमा छिन् । २०६९ र २०७१ को संस्करणमा पहिलो नम्बरमा परेकी इन्दिरा गत वर्ष चौथो स्थानमा थिइन् । पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले यो वर्ष आफ्नो प्रभाव अझ बढाएको देखिन्छ । गएको संस्करणमा सर्वाधिक आकर्षक महिलाको पाँचौं वरियतामा रहेकी सृष्टि यस पटक चौथो नम्बरमा पुगेकी छिन् । यसको कारण बलिउड गीतमा उनको अभिनय एवं नेपाली चलचित्रमा उनको डेब्युलाई पनि मान्न सकिन्छ। पछिल्ला तीन संस्करणदेखि निरन्तर सर्वाधिक आकर्षण महिलाको टप टेनको सूचीमा पर्दै आएकी चकलेटी अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ यस पटक पाँचौं स्थानमा पुगेकी छिन् ।
गत वर्ष सर्वाधिक आकर्षण महिलाको टप टेनको सूचीमा छैटौं नम्बरमा स्थान बनाएकी अकेशा विष्ट यसपटक यो सूचीमा छैनन् । उनीसँगै गत संस्करणको सातौं, आठौं, नवौं तथा दसौं वरियतामा रहेका क्रमश: वर्षा शिवाकोटी, नीति शाह, ऋचा शर्मा र माला लिम्बू पनि यसपटक यो सूचीमा छैनन् । उनीहरूको स्थान क्रमश: यस वर्षको सुपरहिट चलचित्रकी डेब्यु निर्देशक दीपाश्री निरौला, स्वीमर गौरिका सिंह, भलिबल सुन्दरी सिपोरा गुरुङ, अभिनेत्री केकी अधिकारी तथा ड्रिम्सकी ड्रिम गर्ल साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहले लिएका छन् ।
यसअघिका संस्करणमा प्राय: नियमितजसो सर्वाधिक आकर्षण महिला मात्र होइन, कुनै समय आकर्षण महिलाको पहिलो नम्बरमा रहेकी ‘सदाबहार सुन्दरी’ करिश्मा मानन्धर यसपटक छनौटकर्ताहरूको मन जित्न सकिनन् । डेब्यु निर्देशनमै सुपरहिट फिल्म दिएपछि दीपाश्री धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएकी हुन् । रियो ओलम्पिककी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी गौरिका सिंहको पौडी कौशललाई पनि धेरैले मन पराए । अभिनेत्री केकी अधिकारीको परिपक्वता एवं आकर्षक अनुहार तथा नवअभिनेत्री साम्राज्ञीको सुन्दरता एवं अभिनयले पनि धेरैको मन जितेका कारण उनीहरू टप टेनमा पर्न सफल रहे ।
यस्तै, विगतका संस्करणमा आफ्नो बोल्ड शारिरीक बनावट तथा बौद्धिकताले जबरजस्त प्रभाव पार्न सफल माल्भिका सुब्बालाई पनि टप टेनको सूचीमा कायम राख्न पर्याप्त भोट परेन । विगतका केही संस्करणमा सर्वाधिक आकर्षक महिलाको सूचीको टप टेनमा पर्न सफल मोडल साहना ब्रजाचार्य, अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा एवं सञ्चिता लुइँटेल, गायिका कोमल वली, पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मोडल आस्था पोखरेलले उत्साहप्रद मत प्राप्त गर्न सकेनन् । सेक्सी जीउडाल एवं बौद्धिकताका लागि रुचाइएकी अभिनेत्री तथा मोडल झरना ब्रजाचार्यलाई यसपटक पनि केही सहभागीले सर्वाधिक आकर्षक महिला बनाउनुपर्ने पक्षमा मत व्यक्त गरेका थिए ।
पुरुषतर्फ गएको संस्करणको तुलनामा यस पटक धेरै उथलपुथल आएको छ । अघिल्लो संस्करणका ६ जना पुरुष यसपटक पनि सर्वाधिक आकर्षण पुरुषको टप टेनमा अटाउन सफल रहे । ४ जना नयाँ अनुहारले यसपटक आकर्षण पुरुषको टप टेनमा डेब्यु गरे । रोचक त के भने यस पटक आकर्षक पुरुषका लागि सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नेमा सरकारी अधिकारी छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ सर्वेक्षणका क्रममा धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भए । झन्डै १७ घण्टा लोडसेडिङ भोगिरहेको काठमाडौंलाई चौबीसै घण्टा भिलिमिली पार्न देखाएको कुशल व्यवस्थापन क्षमताकै कारण घिसिङ पहिलो रोजाइमा परेका हुन् ।
गत वर्ष सर्वाधिक आकर्षक पुरुषको टप टेनको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेका दयाहाङ राई यस पटक दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् । उनको अभिनय एवं स्वभावले धेरै मतदाताको मन जितेको छ भन्न सकिन्छ । गएको वर्ष थोरै मतले यो सूचीबाट बाहिरिएका युवा नेता गगन थापा यस पटक पुन: आफ्नो प्रभाव फर्काउन सफल भएका छन् । वाकपटुता एवं आकर्षक भाषणशैलीका कारण सबैको रोजाइमा पर्दै आएका थापाले स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा प्रारम्भ गरेका सकारात्मक प्रयासहरूका कारण आफ्नो गुमेको बर्चश्व फर्काउन सफल भएको विश्वास गरिन्छ ।
सर्वाधिक आकर्षक पुरुषको ०६९, ०७० तथा ०७१ को संस्करणमा लगातार नम्बर वान भएर ह्याट्रिक गरेका पारस खड्का गएको संस्करणमा भने चौथो वरियतामा पुगेका थिए । खड्का यस पटक पनि चौथो वरियतामै यथावत् छन् । कलाकार दीपकराज गिरी यस पटक आकर्षक पुरुषको टप टेनको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । पछिल्ला चार वर्षमा उनी टप टेनको सूचीमा अटाउन सकेका थिएनन् । यस पटक उनले निर्माण गरेको ‘छक्का पन्जा’ सुपरहिट भएपछि उनको कामलाई धेरैले खुला दिलले मत दिए । गत वर्ष सर्वाधिक आकर्षण पुरुषको टप टेनको सूचीमा पाँचौं स्थानमा रहन सफल अभिनेता सौगात मल्ल यस पटक छैटौं स्थानमा पुगे ।
गत वर्ष टप टेन आकर्षक पुरुषको सूचीको दोस्रो स्थानमा रहेका युवा फुटबलर विमल घर्तीमगर ५ स्थान झर्दै ७ औं स्थानमा पुगे । यद्यपि विमलको आकर्षक लुक्स एवं उनको स्ट्राइकिङ क्षमताको सबैले प्रशंसा गरे । अघिल्लो संस्करणका नम्बर वान सर्वाधिक आकर्षक पुरुष अनमोल केसीको चकलेटी लुक्स र स्टारडमको पर्याप्त प्रशंसा हुन्छ । यद्यपि यसपटक सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको दृष्टिमा उनी गएको वर्षभन्दा धेरै पछाडि परे । उनी यसपटक ८ औं नम्बरमा छन् ।
कुमार घैंटे इन्काउन्टरदेखि नेपाली फुटबलको म्याच फिक्सिङको अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई तोड्नेसम्मको कामको श्रेय पाएपछि एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल सर्वाधिक आकर्षण पुरुष टप टेन सूचीमा भित्रिएका छन् । अपराध महाशाखामा रहेर निर्भीक प्रहरी अधिकृतका रूपमा उनले धेरैको मन जिते । यस्तै, गएको संस्करणको सर्वाधिक आकर्षण पुरुषको सूचीमा नवौं स्थानमा रहेका आयुष्मान देशराज जोशी यसपटक पनि टप टेनमा अटाउन सफल भए । भलै उनी वरियतामा एक स्थान तल झरेका छन् । यद्यपि यी इमर्जिङ स्टारको ह्यान्डसमनेशलाई धेरैले नोटिस गरेको देखियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि गत वर्ष आकर्षक पुरुषको टप टेनको सूचीमा क्रमश: छैटौं, सातौं, आठौं र दसौं स्थानमा रहेका अभिनेता आर्यन सिग्देल, फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ, अभिनेता अनुपविक्रम शाही तथा महाअभिनेता राजेश हमाल भने यस पटक टप टेनको सूचीबाट बाहिरिए । कडा प्रतिस्पर्धामा चकलेटी अभिनेता सिग्देल झिनो मतले टप टेनको सूचीमा अटन सकेनन् भने गुरुङ, शाही र हमाललाई टप टेन आकर्षण पुरुषका रूपमा उल्लेख्य मत प्राप्त भएन । यसअघिका केही संस्करणका सर्वाधिक आकर्षक पुरुषको टप टेनको सूचीमा अटाएका व्यवसायी सौरभज्योति, दिकेश मल्होत्रा तथा मोडल प्रशान्त ताम्राकारलाई पनि केहीले सर्वाधिक आकर्षक पुरुष बनाउनुपर्नेमा मत जाहेर गरेका थिए।
सर्वाधिक आकर्षक महिलाहरु
१ प्रियंका कार्की
जबरजस्त स्टारडम, सेक्सी जीउडाल, आकर्षण लुक्स प्रियंका कार्कीका खास आकर्षण हुन् । सन् २००५ मा मिस टिनको उपाधि जितेपछि चर्चामा आएकी प्रियंकाले ‘घरबेटी बा’बाट अभिनययात्रा प्रारम्भ गरेकी हुन् । प्रियंकाले ‘मेरो ‘ब्रेस्ट फेन्ड’मार्फत नेपाली चलचित्रमा पाइला टेकेकी थिइन् । श्रीमान् र करियरमध्ये करियरलाई रोजेपछि अहिले उनी सिंगल छिन् । भर्सटाइल छविकी प्रियंका अभिनयसँगै, कार्यक्रम प्रस्तोता, प्रोड्युसर, कोरियोग्राफर, गायिका, मोडल तथा डान्सर पनि हुन् ।
२ हिमानी शाह
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको आकर्षणले जो–कोहीलाई सजिलै मन्त्रमुग्ध तुल्याउँछ । अग्लो सिलित्त परेको जीउडाल, गोरो लाम्चो अनुहार र त्यसैमा विशेष गरी बुनिएको केस राशिमा जब उनी सार्वजनिक ठाउँमा देखिन्छिन्, उनलाई हेर्न तँछाडमछाड चल्छ । ४१ वर्षीया हिमानीको शारीरिक सुन्दरतालाई थप मोहक बनाउने विशेष गुण पनि छन् । सुनमा जडित हीरा जसरी उनको सुन्दरतामा रंग भर्ने ती गुण हुन्— शालिनता, ह्दयस्पर्शी मुस्कान एवं नम्र व्यवहार । पछिल्ला वर्षहरूमा न उनको अनुहारमा, न त बोलीमा राजपाठविहीन हुनुपर्दाको पीडा देखियो । बरु उनी ट्रस्ट खोलेर नेपालीको अनुहारमा मुस्कान छर्न सक्रिय छिन् ।
३ इन्दिरा जोशी
नेपाली ‘साकिरा’ का रूपमा चिनिने इन्दिरा जोशी गायनका कारण जति चर्चामा छिन्, त्योभन्दा बढी चर्चामा छिन्— दर्शकलाई लठ्याउन स्टेजमा उनको शरीरले मार्ने आकर्षण ठुम्का र नृत्यका कारण । आकर्षण जीउडालकी धनी यी गायिकालाई यसै कारणले ‘स्टेज क्विन’को विशेषण दिइएको हो । पप, आधुनिक मात्र होइन, चलचित्रको पाश्र्व गायनमा पनि उत्तिकै सफल इन्दिरा रियालिटी शो ‘नेपाली तारा’ हुँदै गायनको संसारमा भित्रिएकी हुन् । नवलपरासीकी जोशी सर्वाधिक मन पराइएका मध्येकी ब्याचलर सेलिब्रेटीसमेत हुन् ।
४ सृष्टि श्रेष्ठ
सन् २०१२ की नेपाल सुन्दरी सृष्टि श्रेष्ठको आकर्षक फिगर तथा ओठ विशेष मानिन्छ । बेलायतमा बसोबास गर्ने यी सुन्दर मोडलले ‘गाजलु’ बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् । सेक्सी शारीरिक लुक्स एवं अग्लो जीउडालका कारण उनी नेपाली पुरुषहरूको नजरमा विशेष आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएकी छिन् । नारायणघाट चितवनमा जन्मिएकी २८ वर्षीया सृष्टि बलिउड अनप्लगड म्युजिक भिडियो ‘कभी जो बादल बरसे...’ गीतमा अभिनय गरेपछि थप चर्चामा आएकी थिइन ।
५ नम्रता श्रेष्ठ
गोरो अनुहार, गालामा डिम्पल पर्ने क्युट लुक तथा अब्बल अभिनय क्षमता भएकी नायिका हुन्— नम्रता श्रेष्ठ । थिएटर, म्युजिक भिडियो हुँदै सुपरहिट चलचित्र ‘सानो संसार’ मार्फत रजतपटमा आएकी नम्रताको आन्तरिक सौन्दर्य पनि प्रभावशाली छ । चलचित्रमा प्राय: लभरगर्लका रूपमा फिट हुने नम्रता धेरै आधुनिक युवाकी ड्रिम गर्ल हुन् । उम्दा अभिनय क्षमताको बलमै उनले यही वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रिय एवार्डसमेत हात पारिसकेकी छिन् ।
६ दीपाश्री निरौला
विराटनगरकी दीपाश्री निरौला पहिलो पटक नेपाल टेलिभिजनको टेलिश्रृंखला ‘अग्निपथ’ मा ‘कजरी’ को भूमिकामा देखिइएकी थिइन् । त्यसपछि काठमाडौं आएर उनी टेलिफिल्म एवं विज्ञापनहरूमा देखिन थालिन् । दीपाले दीपक श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘गाउँले’ मा गोली सिसाको गीतमा गरेको नृत्य पनि उत्तिकै प्रशंसनीय भयो । दीपकराज गिरीसँग ‘धनियाँ र रामविलास’ शीर्षकको रेडियो कार्यक्रमबाट बढेको दीपकराज गिरीसँगको सामीप्यता हास्य टेलिश्रृखला ‘तीतो सत्य’ हुँदै अहिलेसम्म जारी छ । उनको निर्देशनमा बनेको पहिलो चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ ले व्यवसायिक रूपमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
७ गौरिका सिंह
रियो ओलम्पिककै सबैभन्दा कान्छी खेलाडी रूपमा चर्चा कमाएकी हुन्— गौरिका सिंहले । प्रतियोगितामा सहभागी २ सय ६ देशका ११ हजारभन्दा बढी खेलाडीमध्ये यी जलपरी सबैभन्दा कान्छी अर्थात् १३ वर्षकी मात्र थिइन् । १ सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा सहभागी ३४ खेलाडीमध्ये ३१ औं स्थानमा आए पनि उनको चर्चा उनले जिते सरह नै भयो । बेलायतमा परिवारका साथ बस्दैं आएकी गौरिकाले १२ औं सागमा नेपालका लागि १ रजत तथा ३ कास्य जितेकी थिइन् । उनका नाममा पौडीमा राष्ट्रिय कीर्तिमानसमेत छन् ।
८ सिपोरा गुरुङ
भलिबलकी राष्ट्रिय स्पाइकर तथा नायिका सिपोरा गुरुङले जति आफ्नो विस्फोटक सट एवं अभिनयका कारण चर्चा बटुल्ने गरेकी छिन्, त्योभन्दा बढी चर्चा उनको ग्ल्यामरस छवि र आकर्षण जीउडालको हुने गरेको छ । गोरो बाटुलो अनुहारकी यी सुन्दरीको गाला पर्ने आकर्षक डिम्पलले पनि धेरैलाई मोहित तुल्याउने गरेको छ । सिपोरा लमजुङमा जन्मिएकी हुन् । फिल्म समेत खेल्ने सिपोराले सन् २०१३ को मिस नेपालमा समेत उनले भाग लिएकी थिइन ।
९ केकी अधिकारी
नायिका केकी अधिकारी युवापुस्ताकी चर्चित नायिका हुन् । कुनै समय ‘म्युजिक भिडियो क्विन’का रूपमा चिनिएकी केकी सन् २००९ मा चलचित्र ‘स्वर’बाट नेपाली सिने नगरीमा प्रवेश गरेकी हुन् । पढ्न–लेख्न रुचि राख्ने केकीको छवि फरक छ । आकर्षक अनुहारकी धनी केकीलाई ड्रिम गर्लका रूपमा हेर्ने युवाहरूको जमात पनि ठूलै छ । जोरपाटीमा जन्मिएकी २७ वर्षीया केकीले प्रेसिडेन्सियल स्कुलबाट एमबीए गरेकी छिन् ।
१० साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह
‘ड्रिम्स’बाट ड्रिम गर्लका रूपमा रजतपटमा पाइला टेकेकी हुन्— साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहले । सेक्सी फिगर, आकर्षक लुक्स, आम युवतीभन्दा पृथक र सौम्य उपस्थितिका कारण युवाहरूको धडकन बनेकी यी २१ वर्षीया सुन्दरी आफ्नो दोस्रो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–२’ मा ५ लाख पारिश्रमिक मागेका कारण थप चर्चामा आइन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत साम्राज्ञी सन् २०१४ मा फेस अफ क्लासिक डाइमन्ड ज्वेलरीमा दोस्रो भएपछि ग्ल्यामर क्षेत्रमा आएकी हुन् । उनले डेब्यु चलचित्रबाटै बेस्ट नवनायिकाको एवार्डसमेत हात पारेकी थिइन् ।
टप टेनमा पर्न नसकेका महिला
अभिनेत्री रेखा थापा, वर्षा राउत, गायिका मेलिना राई तथा युवा गायिका आस्था राउत थोरै मतले यो वर्ष टप टेनको सूचीबाट बाहिरिए । गत वर्ष आकर्षण महिलाको टप टेनको सूचीमा परेकी सुन्दर मोडल नीति शाह पनि थोरै मतले बाहिरिइन् । यस्तै सिएनएन सुपरहिरो पुष्पा बस्नेतको सामाजिक जीवनलाई धेरैले मत दिए पनि उनी टप टेनको सूचीमा अटाउन सकिनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मोडल आस्था पोखरेलको सेक्सी जीउडाल एवं आकर्षक व्यक्तित्वलाई मन पराएर भोट दिनेहरू उल्लेख्य रहे पनि त्यो भोट उनलाई टप टेनमा पुर्‍याउन पर्याप्त भएन् ।
अघिल्लो संस्करणमा सर्वाधिक आकर्षण महिलाको टप टेनमा पर्न सफल अभिनेत्री ऋचा शर्मा, मोडल माला लिम्बू, अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी तथा अभिनेत्री अकेशा विष्ट भने यो संस्करणमा छनौटकर्ताहरूको कम रोजाइमा परे भने पाइलट प्रिया अधिकारी, विद्यार्थी नेतृ नवीना लामा, सञ्चारकर्मी बन्दना राना, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, शिल्पा पोखरेल, रीमा विश्वकर्मा, आना शर्मा, रिष्मा गुरुङ, मोडल अदिती बुढाथोकी, मिस नेपाल अस्मि श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञ अनुराधा थापामगर, मोडल एलिसा राई, डिजे जेनीले उल्लेख्य मत हासिल गरे ।
आकर्षक महिला छनौटकर्ता
विकास आचार्य (निर्देशक), विजय लामा (पाइलट), राजेश पायल राई (गायक), राजुकाजी शाक्य (प्रशिक्षक), ज्ञानेन्द्र मल्ल (क्रिकेटर), किशोर कायस्थ (फोटोग्राफर), विकास खतिवडा (फोटोग्राफर), निलडेभिड कटुवाल (फेशन डिजाइनर), डा.रञ्जित झा (डाक्टर), सुशील नेपाल (भिजे), सुबिन भट्टराई (लेखक), बुद्धिसागर (लेखक), सुनिल रावल (निर्माता), रोशन प्रसाईं (विज्ञापन व्यवसायी), निशान घिमिरे (भिडियो एडिटर), भरत रेग्मी (भिडियो एडिटर) तथा केदार श्रेष्ठ (रंगकर्मी) ।
विगतका आकर्षक महिला
२०७२ का १०
प्रियंका कार्की, हिमानी शाह, नम्रता श्रेष्ठ, इन्दिरा जोशी, सृष्टि श्रेष्ठ, अकेशा विष्ट, वर्षा शिवाकोटी, नीति शाह, ऋचा शर्मा तथा माला लिम्बू ।
२०७१ का १०
इन्दिरा जोशी, अकेशा विष्ट, प्रियंका कार्की, करिश्मा मानन्धर, नम्रता श्रेष्ठ, केकी अधिकारी, सुविन लिम्बू, रिमा विश्वकर्मा, सञ्चिता लुइँटेल तथा आस्था पोखरेल ।
२०७० का १०
प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी र रीमा विश्वकर्मा, निशा अधिकारी, नम्रता श्रेष्ठ, माल्भिका सुब्बा, करिश्मा मानन्धर, सहाना बज्राचार्य, अकेशा विष्ट, कोमल वली तथा सदीक्षा श्रेष्ठ ।
सर्वाधिक आकर्षक पुरुषहरू
१. कुलमान घिसिङ
काठमाडौंको लोडसेडिङ हटाएर कुशल व्यवस्थापकमा दरिएपछि कुलमान घिसिङ अहिले हिरोको छविमा देखिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता दर्साउँदैं काठमाडौंलाई झिलिमिली बनाइदिए । इच्छाशक्ति र क्षमता भए असम्भव केही छैन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका कुलमाङलाई साप्ताहिकको सर्वाधिक आकर्षण पुरुष खोजीको सर्वेक्षणमा पनि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त भयो । रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट ईएमबीए गरेका छन् ।
५ फिट ७ इन्च अग्लो खाइलाग्दो शरीरका दयाहाङ राई अभिनय क्षमताका कारण जति लोकप्रिय छन्, उति नै उनको शारीरिक आकर्षणले पनि युवतीहरूलाई लोभ्याउँछ । सन् २००६ मा ‘अनागरिक’बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेका यी नायकले फिल्म ‘लुट’को गोफ्लेको भूमिकाबाट थप चर्चा कमाए । रंगमञ्च हुँदै चलचित्रको पर्दामा देखिएका दयाहाङले झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
वाकपटुता र बोल्ड शैलीका कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उदाएका युवा नेता हुन्— गगन थापा । त्यसयता उनी राजनीतिमा युवापुस्ताका आशाका किरणका रूपमा देखिएका छन् । नेविसंघको महामन्त्री हुँदै कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थापा दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं–४ बाट विजयी भएका हुन् । वर्तमान सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका काठमाडौंमा जन्मिएका थापाले अहिले मन्त्रीका रूपमा चालेका केही सकारात्मक प्रयासको पनि प्रशंसा भैरहेको छ ।
४. पारस खडका
६ फिट १ इन्च अग्लो आकर्षक जीउडालका पारस खड्का राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान हुन् । मैदानभित्र हेल्मेट लगाएका बेला उनको खेल कौशलको जति प्रशंसा हुन्छ, मैदानबाहिर पनि पारसलाई ड्रिम ब्वाईका रूपमा देख्नेहरूको ठूलै जमातले उनको बोल्डनेशको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पारसको कप्तानीमा नेपाली क्रिकेट टिम हासिल गरेका सफलता कारण पनि पारसको आकर्षण आम नेपालीमाझ बढेको पाइन्छ । २९ वर्षीय अलराउन्डर पारस राइट ह्यान्ड ब्याट चलाउँछन् भने उनी राइट ह्यान्ड मिडियम फास्ट बलर हुन् ।
५. दीपकराज गिरी
सदाबहार हास्यकलाकार दीपकराज गिरी नेपाल टेलिभिजनको ‘ट्वाक्क टुक्क’ सिरियलबाट मनोरञ्जनको दुनियाँमा प्रवेश गरेका हुन् । गिरी उत्कृष्ट निर्देशन एवं अभिनय क्षमताका अतिरिक्त शारीरिक रूपमा पनि उत्तिकै आकर्षण छन् । रेडियो नेपालको ‘धनियाँ र रामविलास’ पछि उनको चर्चा चुलिएको हो । रेडियो कान्तिपुरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गिरी ‘तीतो सत्य’का प्रोड्युसर तथा डाइरेक्टरसमेत थिए । ‘तीतो सत्य’ बन्द भएपछि चलचित्र निर्माणमा केन्द्रित दीपकको मूल घर थानकोट हो ।
६. सौगात मल्ल
सन् २०१२ को ब्लकबस्टर चलचित्र ‘लुट’मा हाकु कालेको भूमिकामा दमदार अभिनय गरेपछि प्रसिद्ध भएका हुन्— सौगात मल्ल । थिएटर हुँदै ‘कागबेनी’ मार्फत चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएका सौगात स्टाइलभन्दा बढी अभिनयमा विश्वास गर्ने अभिनेता हुन् । नवपरासी गृहनगर भएका मल्ल आकर्षक व्यक्तित्व एवं अभिनय क्षमताका कारण भर्सटाइल कलाकारका रूपमा चिनिन्छन् ।
७. विमल घर्तीमगर
नेपाली फुटबलका उदीयमान युवा स्ट्राइकर हुन्— विमल घर्तीमगर । नवलपरासीका विमल राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु म्याचमै पाकिस्तानविरुद्ध गोल गरेर चर्चामा आएका हुन् । उनको प्रदर्शनका कारण जति मैदानमा चर्चा हुन्छ, त्यति नै चर्चा बाहिर पनि । ५ फिट ९ इन्च अग्ला १९ वर्षीय विमल आकर्षक लुक्सका कारण पनि युवापुस्तामाझ लोकप्रिय छन् ।
८. अनमोल केसी
धेरै युवतीका ड्रिम ब्वाइ हुन्— अभिनेता अनमोल केसी । चकलेटी शारीरिक बनावटकै कारण जता गए पनि फ्यानहरूले घेरिन्छन् उनी । चलचित्र ‘होस्टल’ बाट नेपाली सिने नगरीमा भित्रिएका यी तन्नेरीले त्यसपछि ‘जेरी’, ‘गाजलु’ र ड्रिम्सजस्ता चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । नायक भुवन केसीका छोरा अनमोल नेपालमा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने नायक हुन् ।
९. सर्वेन्द्र खनाल
नेपाली फुटबलमा म्याच फिक्सिङको अन्तर्राष्ट्रिय जालो तोडनेदेखि गुन्डा नाइके कुमार घैंटेको इन्कान्टरसम्मका घटनाक्रममा महानगरीय अपराध महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल हिरोको छविमा देखिए । आकर्षण शारीरिक बनावटका धनी खनाललाई काठमाडौंको अपराध नियन्त्रण गर्न खेलेको भूमिका कारण ‘सिंघम’ उपनाम समेत दिन थालिएको छ । निडर पुलिस अफिसरको परिचय बनाएका काठमाडौंका ४९ वर्षीय सर्वेन्द्र इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
१०. आयुष्मान देशराज जोशी
म्यान हन्ट नेपालबाट ग्ल्यामर क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आयुष्मान देशराज जोशी सेक्सी जीउडालका कारण युवायुवतीहरूमाझ सर्वाधिक रुचाइएका मोडल हुन् । २३ बर्षीय आयुष्मानले ‘चपली हाइट–२’बाट चलचित्र क्षेत्रमा समेत इन्ट्री मारिसकेका छन् । म्युजिक भिडियोका महँगा मोडलका रूपमा पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ ।
टप टेनमा पर्न नसकेका पुरूष
गत वर्ष आकर्षण पुरुषहरूको टप टेनको सूचीमा छैटौं नम्बरमा पर्न सफल आर्यन सिग्देल यस पटक झिनो मतान्तरले बाहिरिए । उनको चकलेटी लुक्स र अभिनयको धेरैले प्रशंसा गरेका थिए ।अभिनेता निखिल उप्रेती, राष्ट्रिय टिमका चर्चित युवा स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ तथा व्यवसायी बरुण चौधरी पनि थोरै मतको अन्तरले उत्कृष्ट १० बाट बाहिरिए । नेपालमा २ सयभन्दा बढीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका र केही समय पहिले कोरियन डाक्टरको सहयोगमा नेपालमै पहिलो पटक सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोण गरेका अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ पनि थोरै मतले टप टेनमा नपर्ने व्यक्तित्व हुन् ।
गत वर्ष टप टेनको सूचीमा परेका फेसन डिजाइनर प्रवल गुरुङ, महाअभिनेता राजेश हमाल तथा अभिनेता/मोडल अनुपविक्रम शाही यस पटक टप टेनको सूचीमा अटाउन सकेनन् । मोडल पल शाह, ब्यवसायी विश्वास ढकाल, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, व्यवसायी दिकेश मल्होत्रा एवं सौरभ ज्योति, गायक निर्णय श्रेष्ठ, अमृत गुरुङ, राजनीतिज्ञ योगेश भट्टराई, अभिनेता सुशील श्रेष्ठ, मोडल पुष्प खड्का, फेसन डिजाइनर विश्व गौतम तथा मोडल प्रशान्त ताम्राकारले यो सूचीका लागि उल्लेख्य मत प्राप्त गरेका थिए ।
आकर्षक पुरुष छनौटकर्ता
रविना देशराज (बंैकर), ऋचा शर्मा (नायिका), सुष्मा कार्की (नायिका), नवीना लामा (विद्यार्थी नेतृ), शैलजा अधिकारी (फेसन कलेज सञ्चालक), डा. मुकुन्दा शर्मा (चिकित्सक), रोजिना श्रेष्ठ (फेसन डिजाइनर), कला सुब्बा (आरजे), साहाना ब्रजाचार्य (मोडल/भिजे), अनुपम रोशी (लेखक), सुबिन लिम्बू (पूर्व मिस नेपाल), सरिता गिरी (थिएटर आर्टिस्ट), पार्वती राई (नृत्यांगना), सुचित्रा गुरुङ (महिला निर्देशक), मञ्जु कार्की (मेकअप आर्टिष्ट), हेमा मानन्धर (इभेन्ट म्यानेजर) तथा देविका बन्दना (गायिका) ।
विगतका आकर्षक पुरुष
अनमोल केसी, विमल घर्तीमगर, दयाहाङ राई, पारस खड्का, सौगात मल्ल, आर्यन सिग्देल, प्रबल गुरुङ, अनुपविक्रम शाही, आयुष्मान देसराज जोशी तथा राजेश हमाल ।
पारस खड्का, अनमोल केसी, गगन थापा, दयाहाङ राई, अनिल गुरूङ, सुरजसिंह ठकुरी, राजेश हमाल, अनुप विक्रम शाही, विमल घर्तीमगर तथा दिकेश मलहोत्रा ।
पारस खड्का र गगन थापा, विमल घर्ती मगर, राजेश हमाल, भूषण दाहाल, प्रशान्त ताम्राकार, जीवन लुइँटेल र सौरभ ज्योति, सुरज गिरी, अनुप बराल, सौगात मल्ल तथा हरिवंश आचार्य तथा आर्यन सिग्देल।
नायिका ऋचा शर्माले आकर्षण पुरुष छनौटमा सर्वप्रथम विद्युत् प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङको नाम लिइन् । काठमाडौंलाई लोडसेडिङको चपेटाबाट मुक्त गर्न खेलेको भूमिका उदाहरणीय भएको भन्दै उनले कुलमानलाई ‘रियल हिरो’ बताइन् । यस्तै अपराधमुक्त काठमाडौं बनाउन भूमिका खेलेका कारण एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई आकर्षण पुरुषको सूचीमा राखेकी ऋचाले पारस खड्कालाई पनि खुलेरै मत हालिन् ।
नेपाली चलचित्रप्रतिको धारणा नै परिवर्तन गरेको भन्दै सौगात मल्ललाई भोट दिएकी इभेन्ट म्यानेजर हेमा मानन्धरले उनको हिस्सी परेको लुक्सको पनि प्रशंसा गरिन् । अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले बेग्लै पर्सनालिटी भएको व्यक्तिका रूपमा डा. आयुष्मान घिमिरेलाई मत दिइन् । बैंकर रविना देशराजले चिलिमेमा राम्रो काम गरेको र लोडसेडिङ हटाउन अहम् भूमिका खेलेको भन्दै कुलमानको नाम लिइन्। मेकअप आर्टिस्ट मञ्जु कार्कीले ‘क्युट लुक’का अनमोल केसीलाई नम्बर वानमा राखिन् ।‘क्युट लुक, ओभल फेस बिछट्टै राम्रो लाग्छ,’ उनले भनिन् । कार्कीजस्तै फेसन कलेज सञ्चालिका/व्यवसायी शैलजा अधिकारीले पनि अनमोलको गुड लुकिङ फेस आफूलाई मन पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘सर्वेन्द्र खनालले हामीलाई प्राउड हुने काम गरिरहनुभएको छ, उहाँ प्रहरीको बर्दीमा पनि निकै ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ,’ अधिकारीले भनिन् ।
मोडल तथा भिजे सहाना ब्रजाचार्यले आकर्षण पुरुषको नम्बर वानमा गगन थापाको नाम लिइन् । त्यस्तै गायिका पार्वती राईले अनमोल केसीको लुक र हाइटले आफूलाई फिदा बनाउने गरेको बताइन् । ‘अनमोल केसी त बिछट्टै राम्रो छ,’ उनले थपिन्, ‘विमल घर्तीमगर ह्यान्डसम छ र उसले फुटबलमा राम्रो गरिरहेको छ ।’ अनमोललाई पहिलो नम्बरमा मत दिनेमा गायिका देविका बन्दना तथा महिला निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ पनि थिए ।
पूर्व मिस नेपाल सुबिन लिम्बूले आफूलाई १० वटा नाम छान्न हम्मे–हम्मे परेको बताउँदै गगन थापा, दयाहाङ राई, पल शाह, सौगात मल्ल, निखिल उप्रेती, दीपकराज गुरु, कुलमान घिसिङ, विमल घर्तीमगर तथा योगेश भट्टराईको नाम लिइन् । लेखिका अनुपम रोशी तथा भिजे कला सुब्बाले कुलमानलाई पहिलो नम्बरमै मत दिए । डा. मुकुन्दा शर्माले मानव अंग प्रत्यारोपणमा विशेष योगदान पुर्‍याएबापत डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई पहिलो नम्बरमा राखेकी थिइन् । कलाकार सरिता गिरीले सौगात मल्ललाई एक नम्बरमा मत दिइन् भने विद्यार्थी नेतृ नवीना लामाले एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई पहिलो नम्बरमा मत दिएकी थिइन् ।
निर्देशक विकास आचार्यले सर्वाधिक आकर्षण महिलाको पहिलो नम्बरमा साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहको नाम लिए । ‘आमयुवतीहरूभन्दा पृथक, उपस्थिति नै सौम्य र आकर्षक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आकर्षक अनुहार र हार नखाने स्वभावका कारण नम्रता पनि आकर्षक महिलामा छुटाउनै नहुने अभिनेत्री हुन् ।’ निर्देशक आचार्यले विद्यार्थी नेतृ नवीना लामा हरेक पक्षबाट सुन्दर रहेको भन्दै उनलाई मत जाहेर गरे ।
क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले आकर्षण महिला छान्ने क्रममा पहिलो नम्बरमा साम्राज्ञीको नाम लिए । ‘नयाँ जेनरेसनकी साह्रै राम्री अभिनेत्री,’ उनले साम्राज्ञीको प्रशंसा गर्दै भने ।
फोटोग्राफर किशोर कायस्थले ‘ब्युटी विथ ब्रेन’का रूपमा झरना ब्रजाचार्य नेपालकै सर्वाधिक आकर्षक महिला भएको धारणा ब्यक्त गरे । कायस्थले रेखा थापा पनि आफ्नो नजरमा विशेष आकर्षक महिला भएको बताए । प्रियंका कार्की, शिवांगी प्रधान, नम्रता श्रेष्ठ तथा नीति शाह पनि आकर्षक महिलाका रूपमा उनको छनौटमा परे
मेन अफ दी वल्र्ड नेपाल